7 qaab oo wejigaaga aad uga bixin karto cayilka
Home Aragti-doon 7 qaab oo wejigaaga aad uga bixin karto cayilka
Wejiga buuran dadka badankooda ma jecla - haddana sidan samee.
Wejiga cayilan dad badan ayuu dhib ku hayaa. - PHOTO: iStock
Is caateynta waa arrin dhibaato ah oo aan fududeyn. Waxaana ka sii dhib badan marka qeyb yar oo jirkaaga ka mid ah aad dooneyso in aad caateyso.
In wejigaaga oo buuran aad mid dhuuban ka dhigto waa arrin jahwareer keeni karta oo xalkeedana adag yahay.
Nasiib wanaag, waxaa jiro arrimo aad sameyn karto oo wejigaaga ka dhigi kara mid dhuuban oo qurxoon. Halkan ka akhriso 7 qaab oo aad sameyn karto:
Samee jimicsiga wejiga
Jimicsiga wejiga wuxuu u wanaagsan yahay muuqaalka, ka hortagga da’da iyo murqaha wejiga oo xoogeysta.
Warbixin caafimaad ayaa muujineysa in jimicsiga wejiga oo si joogto ah loo sameeyo ay aad ugu wanaagsan tahay quruxda iyo muuqaalkaaga.
Qaar ka mid ah jimicsiyada ugu wanaagsan waxaa ka mid ah, in aad afka hawo ka buuxiso in dhabanada aad u soo taagto – in lagu celceliyo ayaa fiican.
Sidoo kale, in aad bishimada isku laabto – sida in aad qaniineyso – iyo in aad dhoollacadeyso adigoo ilkaha isku xoqayana, waa noocyo ka mid ah jimicsiga wejiga.
In kastoo weli loo baahan yahay cilmi-baarisyo dheeraad ah, haddana jimicsiga wejiga waa muhiim.
Waxaad sameysaa jimicsiga Wadnaha
Mararka qaar jimicsiga jirka kale wuxuu keeni karaa in wejiga aad ka cayisho.Balse jimicsiga jirka oo dhan waxa uu isbedel ku keenaa qeyb kasta oo wejiga ka mid yahay.
Jimicsiga Cardio, waa jimicsiga qeybaha jirka oo dhan, wuxuuna wanaajiyaa heerka wadnaha. Waxaa loo arkaa midka ugu wanaagsan ee la isku caateeyo.
Waxaa jimicsigaas ka mid ah orodka, ciyaaraha, socodka, baaskiilka iyo dabaasha.
Biyaha in aad cabto waa muhiim, waxayna u fiican tahay caafimaadka guud. Si gaar ah, haddii aad wejiga caateyneyso, waa in aad biyo badan cabtaa.
Cilmi-baarisyo badan ayaa muujiyay in biyo badan oo la cabo lagu caatoobayo, iyo in jirkaaga isu dheellitirmayo.
Sidoo kale, waxaa jirto cilmi baaris muujineysa in biyaha la cabo cuntada ka hor ay yareynayaan heerka calory-ga jirkaaga galaya, marka aad cunteyneyso.
Iska jooji cuntooyiinka warshadeysan ee le karbohaydrayd
Carbs-ka warshadeysan sida buskutka iyo baastada waa kuwa ugu daran ee cayilka keena, wejigana mid buuran ka dhiga.
Cilmi baaris ay ka qeybgaleen 277 dumar ah aya muujiyay in cunidda cuntooyiinkan warshadeysan ay xiriir wayn la leeyihiin cayilka iyo caloosha oo aad u waynaata iyo weji kuusan oo buuran.
Qaabka iyo xilliga aad seexato wax ka bedel
In aad xilli wanaagsan seexato waa muhiim, gaar ahaan iscaateynta dhanka wejiga marka laga hadlayo.
Hurdo aan toosneyn ama is dabamarsan waxay kordhisaa heerka saliidda jirka, walwalka iyo hoormoonnada keenana way kicisaa. Sidoo kale cayl ayey leedahay.
Cilmi baaris ayaa lagu ogaaday in habeen kasta aad isku xilli seexato, soona toosta ay u fiican tahay guusha iscateynta iyo isu dheellitirka jirka. Taas waxay meesha ka saareysaa in habeenba xilliga aad doonto seexato.
Iska fiiri qiyaasta sodium-ta aad cuneyso
Waxyar oo sodium ah ayaad ku cayili kartaa, kuna dibiri kartaa. Sidoo kale waxay kuu geysan kartaa wejiga in aad ka bararto.
Sodium waxay keentaa in jirka uu celiyo biyo dheeraad ah, ka dibka jirka ayey ku faafayaan, waxaadna u ekaaneysaa sida qof buuran – balse waa barar.
Dhowr cilmi baaris ayaa muujiyayin biyaha jirk ka buuxsama, gaar ahan dadka cusbada ay u daran tahay, in ay xanuunno kala duwan ka qaadi karaan.
Haddaba, ka fikir in aad yareyso qiyaasta sodium-ta jirkaaga galeysa, si wejigaagana aysan dhibaato u soo gaarin.
Cun raashiinka leh maadada fiber
Mid ka mid ah talooyiinka ugu wanaagsan ee la xiriira wejiga dhuuban iyo in dhabanada kuusan aad iska jarto, waa in aad kordhiso cuntooyiinka leh fiber-ka.
Fiber-ka ku jira cuntooyiinka dhirta ah, sida galleyda iyo digirta, waxay u fiican yihiin hannanka dheef-shiidka, waadna ku dhergeysaa, calooshana kuma fadhiisaneyso. Sidoo kale waxaa kuu kordhaya awoodda.
Qiimeyn lagu sameeyay 62 cilmi-baaris oo lagu sameeyay cunidda Fiber-ka, waxaa lagu ogaaday in ay yareyso cayilka jirka, dhexda iyo wejiga. – Haddii aad batsato raashiinkan, waxaad yeelayesaa dhex-yar iyo weji dhuuban.
Sida dabiiciga ah, waa in aad maalintii cuntaa ugu yaraan 25-38 garaam oo fiber ah. Waxaadna ka heleysaa cuntooyiinka masagada ah.
Previous article10-ka shaqo ee aadka loogaga baahan yahay dalka Britain
Next articleSida ay maskaxdaada noqoneyso haddii sokorta aad joojiso